Izembozo Zezithuthuthu Abenzi & Abahlinzeki | I-China Motorcycle Covers Factory
Ikhava yesithuthuthuunamagama amaningi ahlukile njenge, ikhava yesithuthuthu, izingubo zesithuthuthu, i-carport yezithuthuthu njalonjalo.Lapha sincoma izinhlobo ezimbili zekhava yesithuthuthu, olunye uhlobo olukhulu lwesiliva. Ingapaka kalula izitimela ezihamba ngobuningi ezahlukahlukene, ivikele imoto yakho othulini, esihlabathini, esihlabathini, emvuleni, eqhweni, emoyeni naseqhweni, futhi ivimbele abantu ongabazi ukuthi bathinte futhi bangcolise indle yezilwane.
Isithuthuthu Esihamba Phambili Simboza Isikhumulo Semoto
Le Mbozo Yezithuthuthu ingapaka kalula izithuthuthu ezinendawo encane naphakathi, ivikele imoto yakho othulini, esihlabathini, emadwaleni, emvuleni, eqhweni nasemoyeni, futhi ivimbele abantu ongabazi ukuthi bathinte futhi bangcolise indle yezilwane. Ukubukeka kulula futhi kunesitayela, ngomqondo oqinile wobuchwepheshe.
Kumile kanye Nesithuthuthu Kumboza Isithuthuthu
Le carport yesithuthuthu ingapaka kalula izithuthuthu ezahlukahlukene ezinkulu, ivikele imoto yakho othulini, esihlabathini, esihlabathini, emvuleni, eqhweni nasemoyeni, futhi ivimbele abantu ongabazi ukuthi bathinte futhi bangcolise indle yezilwane.
Ingalungiswa endaweni eyisicaba noma ifakwe kwi-trailer. IQ, Ukubukeka kuyimfashini kakhulu, futhi idizayini inomqondo oqinile wobuchwepheshe.Okunye uhlobo lwethu oluncane olumhlophe, Ingapaka kalula izinhlobonhlobo zamaloli amancane naphakathi nendawo. Ezinye izici zicishe zifane nomkhiqizo owedlule. Kodwa umbala nokuklanywa kwehluke kancane. Ungakwazi ukuhlukanisa futhi ukhethe ngokusebenzisa izithombe imininingwane.